2 Beresosɛm 23 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
2 Beresosɛm 23:1-21
23 Na afe a ɛto so ason mu no, Yehoiada+ nyaa akokoduru, na ɔfaa ɔha ha so mpanyimfo+ yi, Yeroham ba Asaria, Yehohanan ba Ismael, Obed ba Asaria, Adaia ba Maaseia ne Sikri ba Elisafat, na ɔne wɔn kɔɔ apam. 2 Ɛno akyi no, wokokyinkyin Yuda baabiara boaboaa Lewifo+ a wɔwɔ Yuda nkurow nyinaa mu ne Israel agyanom abusuafie+ mpanyimfo+ ano, na wobehyiaam wɔ Yerusalem. 3 Afei bagua no nyinaa ne ɔhene kɔɔ apam+ wɔ nokware Nyankopɔn fie+ hɔ, na ɛno akyi no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Hwɛ! Ɔhene ba+ no na obedi hene+ sɛnea Yehowa hyɛɛ bɔ wɔ Dawid mma ho no.+ 4 Nea monyɛ ni: Asɔfo+ ne Lewifo+ a wɔba mu homeda+ no, mo mu nkyem abiɛsa mu biako bɛyɛ apon ano ahwɛfo;+ 5 nkyem abiɛsa mu biako nso nkɔ ahemfie,+ na nkyem abiɛsa mu biako nso nkɔ Nnyinaso Pon+ no ano, na ɔman no nyinaa mmra Yehowa fie adiwo.+ 6 Mommma obiara nnhyɛn Yehowa fie+ hɔ, gye asɔfo ne Lewifo a wɔresom+ no nkutoo. Wɔn nkutoo na momma wɔnhyɛn mu efisɛ wɔyɛ nnipa kronkron,+ na ɔmanfo no nso nyɛ wɔn adwuma Yehowa anim. 7 Na Lewifo no mfa wɔn akode nkurakura wɔn nsam na wontwa ɔhene no ho nhyia.+ Obiara a ɔbɛba ofie no mu no, wonkum no. Munnnyaw ɔhene, ne nkɔree ne ne mmae mu.” 8 Enti Lewifo no ne Yuda nyinaa yɛɛ nea ɔsɔfo Yehoiada+ kae+ no nyinaa, na wɔn mu biara de ne mmarima a wɔreba hɔ homeda abɛsom ne wɔn a wɔabɛsom na wɔrekɔ homeda+ no bae, efisɛ saa bere no na ɔsɔfo Yehoiada mma wonnyaee wɔn adwuma sɛnea wɔn nkyekyɛm+ te no. 9 Bio nso, ɔsɔfo Yehoiada de Ɔhene Dawid+ mpeaw ne akyɛm akɛse ne akyɛm nketewa+ a ɛwɔ nokware Nyankopɔn+ fie hɔ no maa ɔha ha so mpanyimfo+ no. 10 Afei, ɔmaa ɔmanfo+ no nyinaa faa wɔn akode kurakuraa wɔn nsam, na ɔde wɔn gyinagyinaa ofie no benkum ne ne nifa so ne afɔremuka no ho ne ofie no ho, na wotwaa ɔhene no ho hyiae. 11 Ɛnna wɔde ɔhene ba no fii adi bae,+ na wɔde ahemmotiri+ bɔɔ ne ti, na wɔde Adanse no+ too ne ti so, na wosii no hene, na Yehoiada ne ne mma sraa+ no, na wɔkae sɛ: “Ɔhene nnya nkwa!”+ 12 Bere a Atalia tee gyegyeegye sɛ ɔman no retu mmirika na wɔrekamfo ɔhene+ no, ɛhɔ ara na ɔbaa nkurɔfo no nkyɛn Yehowa fie hɔ. 13 Ɔhwɛe no, ohui sɛ ɔhene no gyina abobow ano adum+ no biako ho, na mpanyimfo+ ne ntorobɛnto+ wɔ ɔhene no nkyɛn, na ɔman no mu nnipa nyinaa redi ahurusi+ na wɔrehyɛn+ ntorobɛnto na nnwontofo+ a wokurakura asanku ne wɔn a wɔma ayeyi dwom so wɔ hɔ. Ɛhɔ ara na Atalia suan n’atade mu na ɔkae sɛ: “Atirisopam! Atirisopam!”+ 14 Ɛnna ɔsɔfo Yehoiada de ɔha ha so mpanyimfo ne asraafo so mpanyimfo no fii adi, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Montwe no mfi nnipa no mu,+ na obiara a obedi n’akyi no, momfa nkrante nkum no!” Ná ɔsɔfo no aka sɛ: “Munnkum no wɔ Yehowa fie.” 15 Enti wɔde wɔn nsa soo no mu, na bere a wɔde no beduu apɔnkɔ pon no ano, ahemfie hɔ no, ntɛm ara na wokum no wɔ hɔ.+ 16 Ɛnna Yehoiada ne ɔman no nyinaa ne ɔhene yɛɛ apam sɛ wɔbɛyɛ Yehowa man+ daa. 17 Ɛno akyi no, ɔman no nyinaa kɔɔ Baal fie hɔ, na wodwiriw gui;+ wobubuu n’afɔremuka+ ne n’ahoni,+ na Baal sɔfo Mattan+ nso, wokum no+ afɔremuka no anim. 18 Bio nso, Yehoiada de Yehowa fie nnwuma no hyehyɛɛ asɔfo ne Lewifo no nsa, sɛnea Dawid+ kyekyɛɛ wɔn mu de wɔn sisii Yehowa fie so sɛ wɔmmɔ Yehowa ɔhyew afɔre no, na sɛnea wɔakyerɛw wɔ Mose mmara mu+ no, wɔnyɛ no ahurusi ne nnwonto mu, sɛnea Dawid hyehyɛe no. 19 Enti ɔde apon ano ahwɛfo+ no gyinagyinaa Yehowa fie apon ano+ na obiara a ne ho ntew wɔ ade biara mu amma mu. 20 Ɛnna ɔfaa ɔha ha so mpanyimfo+ ne akunini ne ɔman no mu atumfoɔ ne ɔman no mu nnipa nyinaa kaa no ho, na wɔde ɔhene no fii Yehowa fie+ hɔ bae. Afei wɔfaa atifi pon no mu baa ahemfie hɔ, na wɔde ɔhene no tenaa ahengua+ no so. 21 Na ɔman no mu nnipa nyinaa kɔɔ so dii ahurusi,+ na asomdwoe baa kurow no mu. Atalia de, wɔde nkrante kum no.+
2 Beresosɛm 23